तपाईंको मुस्कान र सेतो दाँत मा विश्वस्त हुन | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
आफ्नो दाँत लागि लामो धेरै मानिसहरू सेतो थिए. तपाईं आफ्नो दाँत सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कार्यहरू पहेंलो बारी छैन को एक किसिम हो. त्यहाँ फेरि आफ्नो दाँत सेतो सेतो तरिकाहरू छन्. यस लेखमा सेतो र तिनीहरूलाई सेतो राख्न तपाईं दाँत रही लागि विभिन्न सुझावहरू समावेश.
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको दाँत कुशलता दाँत खुराक को घर whitening, प्रयोग गर्नु अघि साफ छन्. तपाईं आफ्नो दाँत teeth.If बिल्कुल सफा तिनीहरूलाई लागू त परिणाम लिंदा असमान सेडिङ हुनेछ अघि जब तपाईं सेतो सफा छैन उत्पादनहरु दांत दाँत थप कुशल हुनेछ.
सबैजना कि सिट्रस फल थाह, सुन्ताला वा कागति जस्तै, भिटामिन सी मा धनी छन्, तर उनीहरूले तपाईं दाँत Whiter बनाउन सक्छ थाह भयो? तपाईं एक कागति बोक्रा वा सुन्तला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं के गर्न छ सबै फिर्ता भाग विरुद्ध आफ्नो दाँत को सतह रगडना छ, जो चमक तिनीहरूलाई गराउँछ. को कागति वा सुन्तला को बोक्रा मा नुन को एक सानो बिट राख्दै द्वारा, नतिजा सुधार गर्न सकिन्छ.
आफ्नो दाँत सेतो राख्न प्रयास गर्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा पेशेवर cleanings छ. प्राप्त तपाईंको दाँत हरेक छ महिना साफ र सधैं आफ्नो भविष्य नियुक्ति अनुसूची जब तपाईं आफ्नो वर्तमान सफाई छन्.
यी उत्पादनहरू आफ्नो दाँत दाग कि रसायन समावेश. यो ब्रश गरेको खुरदरापन बनाउँछ के पक्का आफ्नो दाँत सफा हो.
यदि पिउने सोडा, चिया, कफी वा गाढा रक्सी, साथै पानी SIP. यी गाढा पेय पदार्थ आफ्नो दाँत दाग हुनेछ, विशेष गरी तिनीहरूले नियमित खपत भने. यी पेय पदार्थ को sips बीच आफ्नो मुखमा वरिपरि पानी sips Swishing staining सक्छ कि कुनै पनि अवशेषहरु निर्मूल मदत गर्न सक्छ. यी पेय पदार्थ खपत पछि, सकेसम्म चाँडो आफ्नो दाँत माझ्छु सम्झना.
प्राप्त गर्न एक सानो ज्ञात तरिका आफ्नो दाँत आफ्नो whitest केही फल प्रयोग गर्न छ. उत्कृष्ट फल को एक जोडी उदाहरणहरू दाँत सेतो गर्न सक्ने सुन्ताला र सुन्ताला छन्. तपाईं पनि तिनीहरूलाई सेतो आफ्नो दाँत को सतह विरुद्ध सुन्तला बोक्रा रगडना सक्छ.
भनेर शर्करा खाने पछि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लघु टूथब्रश पूरा. यी खाद्य वस्तुहरू सजिलै आफ्नो दाँत लीन, र staining प्रक्रिया सुरु वा यसलाई थप्न. मिठाई आफैलाई उपचार पछि, ब्रश केही समय लिन. तपाईं आफ्नो दाँत स्क्रब यदि टूथपेस्ट आवश्यकता छैन र त्यसपछि राम्रो तिनीहरूलाई कुल्ला.
तपाईंको crowns आफ्नो दाँत बाँकी जस्तै कहिल्यै सेतो हुनेछ. आफ्नो दाँत Whiter प्राप्त तपाईंको crowns नै रहनेछ. यो crowns पनि अघि भन्दा बढी बाहिर खडा बनाउन सक्छ.
तपाईंले यसलाई आफ्नो दाँत discolored बन्न सक्छ किनभने एक पट्टिका buildup रोक्न आवश्यक.
तपाईं क्यान्डी वा अन्य मिठाई खान गर्दा लागि टाढा stowed एक टूथब्रश राख्न. यी खाद्य पदार्थ धेरै सजिलै दाँत लीन किनभने, तिनीहरूले staining बढाउन सक्छ. यस मिठाई आनंद पछि, दुई वा तीन मिनेट लागि माझ. तपाईं टूथपेस्ट छ छैन, लामो तपाईं राम्रो दाँत स्क्रब र पानी संग liberally कुल्ला रूपमा.
जैविक नरिवल तेल तपाईंको teeth.If लागि ठूलो whitening, एजेन्ट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईं एक mouthwash रूपमा नरिवल तेल प्रयोग, यसको बारेमा तपाईंको दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ 10 प्रति दिन मिनेट. पछि बारेमा 10 मिनेट, तपाईं सामान्यतया हुनेछ रूपमा आफ्नो मुख बाहिर र ब्रश कुल्ला. तपाईं भन्दा कम केही दिनमा केही परिणाम देख्न सक्थे.
प्रत्येक भोजन पछि आफ्नो दाँत लिंदा तिनीहरूलाई discoloring मुक्त राख्न मदत गर्नेछ. तपाईं कफी पिउने हुँदा यो अत्यावश्यक छ.
एक जैविक नरिवल तेल तपाईंको दाँत दांत गर्न बस टिकट हुन सक्छ. नरिवल तेल मा एक 10 मिनेट दैनिक कुल्ला दिने आफ्नो दाँत आफ्नो मुस्कान को सफेदी मा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ. पछि 10 मिनेट पारित गरेको छ, आफ्नो मुख कुल्ला र सामान्य जस्तै आफ्नो दाँत सफा. तपाईं केही दिन पछि केही परिणाम हेर्न गर्नुपर्छ.
आफ्नो दन्त चिकित्सक तपाईं जो घर दाँत राम्रो तामचीनी वा गिजा हानिकारक बिना बताउन सक्नुहुन्छ.
तपाईं एक ठूलो मुस्कान छ भने नियमित रूपमा आफ्नो दाँत माझ्छु. खाद्य र अन्य वस्तुहरू आफ्नो दाँत मा निर्माण र उनलाई दाग सक्छ. के तपाईं नियमित आफ्नो दाँत माझ्छु यदि दाँत discoloration बारेमा fret पर्नेछैन.
पानी दाग ​​विरुद्ध लड्न अत्यावश्यक उपकरण हो. यो आफ्नो दाँत बन्द कुल्ला साथै staining रोक्न दुवै गर्न मद्दत गर्छ. यो प्रत्येक दिन आफ्नो पानी खपत राख्न राम्रो स्वास्थ्य अभ्यास छ, विशेष गरी प्रत्येक भोजन पछि.
आफ्नो दाँत को सफेदी कायम राख्न, सफा र एक चेक अप लागि नियमित दन्त चिकित्सक जाँदै अत्यावश्यक छ. नियमित रूपमा भइरहेको तपाईंको दाँत सेतो राख्न ठूलो तरिका हो. तपाईं आफ्नो दन्त चिकित्सक कम्तीमा हरेक छ महिना भ्रमण गर्नुपर्छ.
ती मोती के देख गरिएको छ कि सेतो दाँत प्राप्त सजिलो तरिका छ दांत टूथपेस्ट प्रयोग गर्न. घर्षण मार्फत, यो टूथपेस्ट दाग र पट्टिका को rids. समयको क्रमसँगै, को दाग गायब सुरु रूपमा brighter दाँत हुनेछ.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुँदैन दाँत दांत को लागि एक सुरक्षित उपचार. यो असुरक्षित छ र आफ्नो दाँत discolored हुन सक्छ; तपाईं पनि दुई अलग अलग रंग दाँत संग अन्त हुन सक्छ. हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ कि कुनै पनि उत्पादन जोगिन.
इनामेल मूल साथै संक्रमण दाँत हानि गर्न सक्छ कि अन्य कुराहरू रोक्न मद्दत गर्छ कि सुरक्षा खनिज पत्र मा खनिज को एक पत्र छ. केही दाँत whitening उत्पादनहरु नकारात्मक तपाईंको दाँत को सफेदी असर गर्न सक्छ.
तपाईं माझ र एक दिन दुई पटक आफ्नो दाँत floss भने, तपाईं अक्सर यो छैन कि ती तुलनामा शायद Whiter दाँत हुनेछ. यी विधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत discolors जो पट्टिका को buildup हटाउने. यो आफ्नो दाँत माझ्छु एक राम्रो विचार छ र पनि प्रत्येक भोजन पछि floss.
तपाईंले यो धेरै मान्छे को लागि हुन सक्छ हार्ड एक Whiter smile.As प्राप्त गर्न आफ्नो कफी कम हुनेछ, कफी discolored र दाग दाँत को एक प्रमुख कारण हो. कफी को सट्टा तातो चकलेट पिउन प्रयास.
प्रभावकारी आफ्नो दाँत सेतो सक्नुहुन्छ कागति र कागती रस मा सिट्रस पुरानो पत्नीहरू कथा छ. यो उपचार को यो विधि पूर्णतया टाढा रहन एक राम्रो विचार छ.
तपाईं कुनै पनि whitening, समाधान मात्र प्राकृतिक दाँत मा काम गर्दछ गर्नुपर्छ. कुनै पनि कृत्रिम सतहहरु, crowns सहित, सम्बन्ध गाँसिसकेको, प्रत्यारोपण र जस्तो रंग मा बदल गरिनेछ. दाँत whiteners प्रयोग दन्त काम सक्छ, यस्तो crowns रूपमा, आफ्नो प्राकृतिक सेतो दाँत विरुद्ध खडा गर्न.
तपाईं नियमित टूथपेस्ट र flossing संग आधारभूत सफाई तालिकामा स्वस्थ र Whiter दाँत हुनेछ. बेकिंग सोडा समावेश उत्पादन तपाईं floss रूपमा दाग हटाउने र flossing प्रभावकारी छन्.
लागि आफ्नो teeth.You पनि सिट्रस रस हुँदैन साथै खट्टे फल धेरै एसिड हुन सक्छ. निहित एसिड आफ्नो दाँत लागि भयानक हो. तपाईं रात मा पल्टिने अघि यी खाद्य पदार्थ खाने बेवास्ता गर्न चाहनुहुन्छ, तिनीहरूले एसिड भाटा ले पीडित तपाईं बढी सम्भावना बनाउन किनभने, जो पनि आफ्नो दाँत बिगार्न सक्छ.
तपाईं आफ्नो दाँत दांत मा रुचि छ भने, पहिलो आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा. तपाईं दाँत Whitening एक सरल कस्मेटिक काम हो. आफ्नो दाँत स्वस्थ सुनिश्चित गर्न नियमित आफ्नो दन्त चिकित्सक जानुहोस्. बनाउन एक दाँत दांत खुराक बारेमा एक दन्त चिकित्सक कुरा गर्न निश्चित.
सँगै सुन्तला peels र खाडी पात पीस द्वारा एक पाउडर बनाउन. यो पाउडर आफ्नो टूथब्रश र संवेदनशीलता लागू गर्न सकिन्छ.
तपाईं cavities.Make पूर्व प्रक्रियाहरु दांत कुनै पनि घर सुरु गर्न आफ्नो दन्त चिकित्सक संग परामर्श गर्न निश्चित जस्तै नगरि दन्त मुद्दाहरू छन् भने तपाईं को लागि उपयुक्त हो आफ्नो दाँत सेतो छैन.
भनेर दावी टूथपेस्ट भरोसा छैन तिनीहरूले तपाईंलाई Whiter दाँत दिनेछौँ. धेरै मात्र अलिकति आफ्नो दाँत सेतो, यदि सबै, तर तपाईं अन्य उत्पादनहरु तिमी सेतो दाँत चाहनुहुन्छ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक दांत टूथपेस्ट किन्न भने, बेकिंग सोडा समावेश गर्ने एक खरीद, रूपमा वास्तवमा मदत गर्न सक्छ.
यसो भन्नुभयो रूपमा, त्यहाँ सेतो दाँत चाहनुहुन्छ कि धेरै फरक मान्छे हो. विभिन्न रणनीति तपाईंको दाँत पहेंलो दाग दांत र निर्मूल लागि उपयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं बस यहाँ प्रस्तुत गरिएको जानकारी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आफ्नो दाँत सकेसम्म सेतो हुन सक्छ.
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: उज्ज्वल सेतो मुस्कान, तपाईंको मुस्कान मा विश्वस्त, मुस्कान, सेतो दाँत